Nampirongatra Ny Fanararaotana Tany Amin’ny Toby Foiben’ny Mpitady Fialokalofana Ivelan’i Aostralia, Ao Nauru Ilay Antontan-Taratasy Tafaporitsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2016 3:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Español, English
Any Melbourne, hetsika ho fanoherana ny fiverenan'ireo mpitady fialokalofana sy ireo mpitsoaponenana any Nauru. Sary avy amin'ny pejin'ny Flickr-n'i Takver (CC license)
Niteraka rojon-korontanà fanararaotana ara-nofo, fanafihana ary ny tranganà fandratràn-tena tao amin'ny toby foiben'ireo mpitady fialokalofana any Aostralia, any amin'ny firenena bitik'i Nauru any Pasifika ireo antontan-taratasy roa arivo mahery tafaporitsaka. Navoakan'ny The Guardian tamin'ity herinandro ity ireo antontan-taratasy nasiam-panitsiana. Mandrakotra ny fotoana teo anelanelan'ny May 2013 sy ny Oktobra 2015 ireo pejy 8.000 mahery. Maherin'ny antsasak'ilay tranga no mahakasika ny ankizy.
Indray mandeha, voalaza fa nidaroka ankizivavy kely dimy taona ny mpiambina tao amin'ilay toby, ” mafy ary nampisavoana sy nampitontona azy tamin'ny tany ilay daroka”. Rakitra iray hafa nitantara tamin'ny antsipirihany ny fomba nandrahonan'ny ray anankiray hamono ireo zanany sy ny tenany taminà trangan-javatra maro, saingy tsy vao voalohany no nandefasana azy tany amin'ny sampan-draharaha mikarakara ny marary saina. Taminà tatitra iray hafa, vehivavy mpitady fialokalofana iray no nilaza fa tao anatin'ny ‘lisitr'ireo’ vehivavy tokantena ‘andrasan'ireo’ mpiambina an'i Nauru izy.
Namelabelatra karazam-piaina maharikoriko sy tsy azo leferina ireo antotan-taratasy tafaporitsaka : vehivavy voan'ny mamany lava nefa tsy mety manao salaka ; tsy firaharahiana ny baikon'ireo mpitsabo mpanara-maso tsy tapaka ny fitsaboana vonjitaitra ; trano fivoahana maloto mandritra ny herinandro ; ary ireo voatàna voatery mipetraka ao aminà trano lay feno kadradraka.
Azo tsapain-tànana ao amin'ny Twitter ny vokatr'ireo hatezerana :
Aoka izay. Tsy inona akory ny toby foibe ivelan'i Aostralia fa tobim-pamoretana fanitsakitsahana ny zon'olombelona any ivelan'ny firenena.
Azafady mbà ataovy ny fanadihadiana momba ny fampijaliana ataon'ny fitondrana ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny #naurufiles #manus https://t.co/0nDiQP1N9B ry .@afpcommissioner @afpmedia
Henatra henatra henatra ho anao ry Aostralia. Alamino ny #fanararaotana amin'izao fotoana izao, ajanony fialàna andraikitra. Mankaloiloy ny mamaky ny #NauruFiles . https://t.co/KsoyONNUew
Tamin'ny volana Jona, mpitsoa-ponenana sy mpitady fialokalofana 442 no nipetraka tany amin'ny ‘tobim-paritra fikarakaràna” ao Nauru, ary ankizy ny 49. An-jatony maro no miaina any “anaty vondrom-piarahamonina” any Nauru, ary tsy ao anatin'ny faritry ny antontan'isan'ny governemanta. Tsy mahazo manorim-ponenana ao amin'ny firenena izay rehetra tonga amin'ny sambo any amin'ny morontsiraka mba hitady fialokalofana, izany no politikan'ny governemanta Aostraliana amin'izao fotoana izao. Aleony mandefa azy ireo any Nauru, na any amin'ny nosin'i Manus any Papoasie Nouvelle Guinée ho amin'ny toby vonjimaika na maharitra mba hanaovana ny ” fikarakaràna ivelan'ny firenena”.
Milahatra amin'ny fitsikeràna ny fomba fikarakaràn'i Aostralia ireo mpitsoa-ponenana ihany koa ny Kaomisiona ambony miandraikitra ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny Firenena Mikambana sy ireo fikambanana am-polony misahana ny zon'olombelona, ny lalàna ary ny fahasalamana araka ny #NauruFiles .
Tsy voalohany, na farany
Na dia zava-dehibe aza ilay fiporitsahana farany teo dia tsy vao voalohany – na hoe farany – no nampiady hevitra ilay politikan'ny fanatobiana ataon'i Aostralia any ivelan'ny firenena. Ireo tatitra marobe notohanan'ny governemanta sy ireo fikambanana tsy miankina, isan'izany ny ‘Ireo ankizy adino’ an'ny Kaomisiona Aostraliana misahana ny zon'olombelona tamin'ny 2014, ny gazetiboky Moss, ary ny fanadihadiana niarahan'ny Amnesty International sy ny Human Rigghts Watch nanao, dia efa samy nitatitra ireo fanararaotana natao tany Nauru.
Ny valintenin'ny olona mody malefadefaka tamin'ny #NauruFiles anefa, na izany aza, dia nahatonga ny olona tony sasany ho kivy ny amin'ny zava-misy na dia ampy hanetsehana fanovàna goavana aza izany.
Pejy voalohan'ny @guardian isaky ny Alarobia any UK ny #Naurufiles. Ho heniky ny medaly volamena ny haino aman-jery Aus
Asehon'ireo valinteny ho an'ny #naurufiles ny habibiana tahaka izany miaraka amin'ireo Aostraliana manodina fotsiny ny lohany tsy hijery.
Raha ny marina, dia ny fanarahana an-jambany ny fomba mahazatra sy ny fandàvana no avalin'ny governemanta ny #NauruFiles hatramin'izao.
Tsy nihambahamba ny Minisitry ny fifindràmonina, Peter Dutton, nanameloka ireo mpitady fialokalofana ho nanova ny tatitra momba ny fanararaotana amin'ny fikasàna mitavozavoza hiditra an'i Aostralia, tamin'ny filazana hoe ” misy ireo olona manana finiavana hanao fitarainana diso.” Nambaran'ny Praiminisitra Malcolm Turnbull fa tokony ” ho dinihina tsara” ireo antontan-taratasy, fa laviny kosa ny hamaly ny vondrona mpanao fanadihadiana. Nandritra izany fotoana izany, notakian'ny mpitarika ny Antokon'ny Mpiasa ao amin'ny antoko mpanohitra, Bill Shortenn ny mpisolovava mahaleotena ho an'ny ankizy, fa naatony ny fangatahana fanakatonana ny tobin'i Nauru.
Raha nahagaga ny maro ny faharetana sy ny havesa-danjan'ilay fiampangana fanararaotana, ireo izay liana tamin'ny fivoaran'ny politikan'i Aostralia momba ny mpitady fialokalofana nandritra ny folo taona eo ho eo kosa, tsy mba isan'izy ireny. Nampidirin'ireo antoko anankiroa goavana ao amin'ny fandaminana ilay atao hoe ‘Ny Vahaolan'i Pasifika’ , ny politikan'ny fandefasana ireo mpitady fialokalofana ho any amin'ny nosy firenena lavitra, toy izay hikarakara azy ireo any amin'ny tanibe Aostraliana.
fampatsiahivana : raha mampanahy anao izay novakianao tao amin'ny #NauruFiles, tadidio : voasazin'ireo antoko anankiroa lehibe io fanararaotana io. Fampihorohoroan'ny antoko roa
Tsy isalasalàna, efa nisy olona nahita ny PM Aostraliana hatramin'ny nisian'ny Vahaolana Pasifika ka voaheloka tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ?